Taratasy fanariana jiro miteraka plastika China Manufacturer
Description:Ny voa voajanahary voa mat.,Toeram-pandehanana fanatodizana,Toeram-pandehanana fanatodizana ho an'ny voninkazo
Home > Products > Seeding Heater System > Seedling Heater Tray > Taratasy fanariana jiro miteraka plastika
100x178mm Plastics Heating Pad for Flower Pot
Ny Seatring Heat Mat dia manome ny hafanana ho an'ireo voa mba hampangatsiahana haingana sy famerenana. Noho ny vokatra tsara indrindra, dia manoro ny voa manomboka amin'ny fantsom-pamokarana ary ny vovonam-pamokarana. Manaisotra ny totozy avy ao anaty fitoeran-javatra rehefa hita ny fotsy fotsy voajanahary, matetika eo anelanelan'ny 5 -14 andro aorian'ny fiterahana. Azo atao ny mikarakara mivantana eo amin'ny fonosana mitombo . Manomboka haingana ny fotoam- bary ary lasa fomba tsara hanomezana ny lohanao ny lohanao.
Ny fanamafisam-peo ny rindrina 100 * 178mm
Ny voa voajanahary voa mat. Toeram-pandehanana fanatodizana Toeram-pandehanana fanatodizana ho an'ny voninkazo Ny fambolena voajanahary Mat Zava-maniry fambolena voajanahary Fiara Fiofanana fiara mat Fitaovam-piadiana mahery vaika Mat Fanofanana alikaola mat. Mat